Duqa Muqdisho “Waxaan beegsanaynaa sidii aan kor ugu qaadi lahayn fursadaha waxbarashada Gobolka Banaadir” – Banaadir Times
Duqa Muqdisho “Waxaan beegsanaynaa sidii aan kor ugu qaadi lahayn fursadaha waxbarashada Gobolka Banaadir”
By banaadir 28th July 2018 180 No comment
Duqa Muqdisho, ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Eng. Yarisow) ayaa daah-furay barnaamijka bandhigga Jaamacadaha oo ah madal sanadkii labaad la qabanayo taas oo dib u eegis loogu sameynayo heerka waxbarasho dalka, kaalinta jaamcaduhu ay ka soo-qaateen samata bixinta waxbarashada xilligii bur burka iyo caqabadaha haatan jira ee muhiimka ay tahay in wada jir aan wax uga qabano.
Guddoomiyaha ayaa bogaadiyey muwaadiniintii Soomaaliyeed ee sida is-xilqaanka ugu istaagay howlahay waxbarashada, xilli duruufo adag ay ka jireen dalka, isagoona tilmaamay in shakhsiyaadka, xarumaha waxbarashada iyo dalladaha ay ku mideysanyihiin ay shacabka Soomaaliyeed u buuxiyeen kaalin taariikhiga ah.
“Madashan waxa ay inoo tahay fursad aan isku waydaarsanno horumarka aan ka gaarnay waxbarashada iyo caqabadaha aan xalka u raadinayno, waana mid ka mid ah waddooyinka guusha lagu gaaro, sababtoo ah guushu waxa ay ku jirtaa in wixii qabsoomayna la bogaadiyo, wixii kalena la isla meel dhigo qorshihii lagu horumarin lahaa.”
Guddoomiyaha ayaa ugu baaqay aqoonyahannada Soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada in ay kaalintooda ka qaataan bandhiggan, isla markaasna ay la wadaageen bahda waxbarashada heer jaamacadeed fikaradaha iyo tallooyinka ku qotoma tayeyna waxbrashada sidii ay u noqon lahayd mid wanaagsan.
“Annaga oo kaashanayna Hay’adaha Waxbrashada heer Federaal, waxaan beegsanaynaa sidii aan kor ugu qaadi lahayn fursadaha waxbarashada Gobolka Banaadir iyo in aan fursado shaqo u abuurno ardayda ka qalin jabisa jaamacadahaas oo tayo waxbarasho iyo xirfad shaqo-ba ay ka muuqato in badan oo kamid ah ardaydii laga shaqaaleysiiyey gobolka.”
Sidoo kale, Guddoomiye Yarisow ayaa kormeeray goobo bandhigeed gaar gaar ah oo jaamacaduhu ay ku soo bandhigayeen sooyaalkooda waxbarasho,kulliyadaha iyo fursadaha ay ugu tala galeen ardayda ku biiraysa sanad dugsiyeedka 2018-2019, isagoona halkaas warbixinno kaga dhagaystay maamulka iyo matalayaasha Jaamacadaha.
Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida oo Xukun ku riday Hoggaamiyeyaal ka tirsan Daacish
Madaxweyne Farmaajo iyo Wafdigiisa oo Hab Maamuus wanaagsan loogu soo dhaweeyay Magaallada Asmara(Sawirro)
Howlgal dad lagu qabtay oo laga sameeyay Magaalada Jowha
Madaxweynaha Galmudug oo Qaadacay Xil ka qaadistii ay ku sameeyeen Xildhibaanada Baarlamaanka
Gaadiid ay saarnaayeen Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Gobolka Gedo oo la weeraray
By banaadir 10th January 2021